USA: Waa in si deg deg ah loo qabto doorashooyinka Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
USA: Waa in si deg deg ah loo qabto doorashooyinka Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay jahawareerka doorashooyinka ee ka jira dalka Soomaaliya.
USA – Qoraal ka soo baxay xaafiiska, Xog-hayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony J. Blinken, ayaa lagu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay, jahawareerka iyo hubanti la’aanta siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, taas oo waddanka gali karta dib u dhac xooggan.
“Mareykanku wuxuu aad uga walaacsan yahay jahwareerka doorashooyinka ee ka jira Soomaaliya, taasoo abuureysa hubanti la'aan siyaasadeed oo khatar ku ah amniga, xasilloonida, iyo horumarka dalka. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay USA.
Wasaaradda arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ugu baaqday Madaxda Soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan danta gaarka ah, isla markaana ku amartay in ay ogolaadaan in si degdeg ah loo qabto doorashooynka dalka.
“Waxaan ugu baaqeynaa Madaxda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah in ay dhinac iska dhigaan ujeeddooyinka siyaasadeed ee gaarka ah, ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed, isla markaana oggolaadaan in si deg deg ah loo qabto doorasho hufan oo loo dhan yaha”y. ayaa sidoo kale lagu warka.
Antony J. Blinken, wuxuu dhagaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku dhibciyay in caqabadaha hada jira ay wiiqayaan wixii wanaag ahaa ee la soo maray isla markaana ay dib u dhigayaan, dib u habaynta sida deg degga ah loogu baahan yahay, si Soomaaliya ay ugu sii socoto wadada loo marayo dey cafin dhameystiran, iyo la dagaalanka Kooxda Al-Shabaab.
Qoraalkan waxaa lagu sheegay in Mareykanku uu taageersan yahay in Muwaadiniinta Soomaaliyeed, qabsadaan Dibad-baxyo nabadeed, waxaana sidoo kale lagu caddeeyay in USA si adag kaga soo hor jeeddo, in rabshado la abuuro, dhinac kastaba.
Ugu danbeyn, Madaxda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay badbaadiyaan mustaqbalka dalka, isla markaana gaaraan heshiis deg deg ah, si loo qabto doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.